Incwadi "I-Brazilian Clichés" ibunjwe isebenzisa izithombe ezisuka kukhathalogu yakudala yamaqembu aseBrazil. Kepha isizathu sesihloko saso asikho kuphela ngenxa yama-clichés asetshenziselwa ukwakheka kwemifanekiso yawo. Ekuphenduleni kwekhasi ngalinye, sigijimisa kwezinye izinhlobo zamaqembu aseBrazil: ngokomlando, njengokufika kwamaPutukezi, ukubanjwa kwamakhethini kwabomdabu baseNdiya, ikofi kanye nemijikelezo yezomnotho yegolide ... kufaka ngisho namaqembu aseBrazil anamuhla, agcwele izimbangi zomgwaqo, izikweletu, amakhondomu avaliwe kanye nokuhlukaniswa - Kuvezwa ekulandiseni okubonakalayo okungahloniphi kwesimanje.
I-Organic Olive Yamafutha
I-Organic Olive Yamafutha Amafutha omnqumo e-Epsilon angumkhiqizo ongu-limited edition ovela kuma-olive organic olive. Yonke inqubo yokukhiqiza yenziwa ngesandla, kusetshenziswa izindlela zendabuko futhi uwoyela we-olive ungabilisiwe. Sihlelele le phakethe sifuna ukuqinisekisa ukuthi izitho ezibucayi zomkhiqizo onempilo kakhulu zizotholwa ngumthengi kusuka ku-mill ngaphandle koshintsho. Sisebenzisa ibhodlela iQuadrotta elivikelwe isisongelo, eliboshwe ngesikhumba futhi lifakwa ebhokisini lokhuni elenziwe ngesandla, elivalwe ngentambo yokufaka uphawu. Ngakho-ke abathengi bayazi ukuthi umkhiqizo uvela ngokuqondile kusuka ku-mill ngaphandle kokungenelela.
Itafula Lokungena I-ORGANICA isithombe sikaFabrizio sefilosofi yanoma yiluphi uhlelo lwezinto eziphilayo lapho zonke izingxenye zixhumene khona ukuze zibekhona. Lo mklamo wawususelwa ekuthini yinkimbinkimbi yomzimba womuntu nokwaziwa kwangaphambi komuntu. Isibukeli siholele ohambweni olungezansi. Umnyango walolu hambo kunezindlela ezimbili ezinkulu zokhuni ezithathwa njengamaphaphu, bese kuba umgodi we-aluminium onesixhumi esifana nomgogodla. Umbukeli angathola izinduku ezisontekile ezibukeka njengemithambo yegazi, umumo ongachazwa njengesitho kanti finale ingilazi yethempulethi enhle, eqinile kodwa ibuthaka, njengesikhumba somuntu.
Incwadi I-Organic Olive Yamafutha Ikhalenda Ikhalenda Itafula Lokungena Ikhalenda